Lazada.com.ph Iikhowudi zekhuphoni
BDO Visa Credit Cardholders Get ₱300 Off ₱3000 Spend ILazada ibonelela ngoluhlu lweemveliso kwiindidi ezahlukeneyo. Ukusuka kubathengi be-elektroniki njengee-smartphones kunye nee-vacuums kwiindlela zefashoni zamva nje, unokufumana konke kweli qonga. Bhalisa kwincwadana yethu ekhethwe ngesandla i-Lazada Philippines izaphulelo, izibonelelo, iivawutsha, imicimbi, izithembiso kunye nentengiso yazo eshushu.
Fumana i-Php100 xa usebenzisa i-GCash njengeNdlela yeNtlawulo ILazada Philippines ithengisa ngokukhawuleza yonke imihla, kodwa ezi zinto zihlala kuphela de zithengiswe. Yenza iakhawunti yabathengi yeLazada Philippines ukugcina i-30-50% kumatyala efowuni kunye neetafile eziphathwayo. Jonga iphepha elingaphambili lewebhusayithi yeLazada Philippines ukufumana uninzi lwezinto zokuhamba kunye nezinto zasendlini.
₱50 Khetha IziNyango Ngokuthenga kwe-Gcash ILazada ikwazisa ngokukhethekileyo usetyenziso rhoqo ngoku! Fumanisa iShedyuli yokuThengiswa kweLazada ePhilippines 2021. Qiniseka ukuba ugcine iphepha lamaphetshana kaLazada Rappler kwiibhukhmakhi zakho kwaye ube usexesheni ngevawutsha yakutshanje kunye nekhadi lokuthenga ngetyala njengeevawutsha zeBDO ngexesha le-11.11, 12.12, kunye nentengiso yeKrisimesi kunye noMnyaka omtsha.
20% Isaphulelo se-SHOP2GIVE Exclusives Ikhowudi yeLazada Promo kunye neKhowudi yeVawutsha ka-Agasti 2021. Thenga iintlobo ngeentlobo zeemveliso ezikhoyo ngexabiso elingenaxabiso kuphela eLazada Philippines. Ngoluhlu lweemveliso, ufumana zonke izinto eziyimfuneko okanye iimveliso zolonwabo kwindawo enye, fumana izaphulelo ezinxulumene noko kwiwebhusayithi yethu edweliswe ngohlobo lweekhowudi zokunyusa zikaLazada, kunye nokunye.
Fumana Ithuba lokuwina i-Condo xa usebenzisa indlela yeNtlawulo ye-GCash Iikhuponi zeLazada kunye neivawutsha ziyindlela elungileyo yokugcina isixa semali sakho ngelixa uthenga ku- lazada.com.ph. Sisebenza nzima ukuqinisekisa ukuba awuphoswa lithuba lokufumana isaphulelo esithe kratya obukade usilindile, nokuba kungokuthengisa okanye ukunikezela ngentengiso okanye ikhowudi yekhuphoni enesaphulelo.
Fumana isaphulelo se-20% ukuya kwi-200 yokuthenga Ikhowudi yokuPhakanyiswa kweLazada: Imiyalelo yeRedMart kwiAdd eyongezelelweyo eyi-15 ye-Sitewide. Iinkcukacha ezithe kratya. Sebenzisa le khowudi yodwa yokukhuthaza uLazada ukufumana isaphulelo se- $ 15 kwii-odolo zakho kwiRedMart. Faka ikhowudi: *** 15OFF xa uphuma usebenzisa ubuncinci be- $ 80 ukukhulula isaphulelo ngaphambi komhla wama-31/07/2021. Jonga eli Khuphoni.
Phumelela iPhoto yeProfayili eyiNgcali ngeNtengo eyi-1500 Ikhowudi yeLazada Voucher 2021 Iinkcukacha: Jonga iivenkile ezininzi eLazmall ukugcina imali enkulu kwii-odolo zakho. Fumana ukuya kuthi ga kwi-80% isaphulelo kubuhle, ifashoni, iimfuno zasekhaya, njl. Akukho sidingo sokuhlawula iindleko zokuthumela ngenqanawa ukuze ufumane iiodolo zakho. Esi sibonelelo sinokubanjwa ngabasebenzisi abadala kunye nabatsha.
Fumana i-10% kwiLazada X Gcash thengisa kwi-lazada. UKHATHALELO LWABATHENGI. IiOda zeZiko loncedo Landelela iodolo yam. Inombolo yakho ye-oda: Ngayo nayiphi na eminye imibuzo, Cofa apha. Ngema. bhalisa. Lawula iAkhawunti yam yee-odolo zam Uluhlu lwam lwezixhobo & neeVenkile ezilandelelweyo ...
Fumana i-35% OFF * Kwizinto zobuhle kunye nezeFashoni kuTyelelo lwaBasetyhini! Jonga ngeKhowudi kunye nePa ... Bhrawuza iphepha lethu lamaphetshana eLazada namhlanje kwaye ungalibali ukukhangela iphepha lethu le-12.12 lodidi ngeendlela ezahlukeneyo ze-12.12 coupons! Isikhokelo sokuThenga esiphambili seLazada Ngaba uLazada ubonelela ngekhowudi yokuthumela simahla? Ewe. Unokuzikhulula iivawutsha zokuhambisa simahla zikaLazada kubarhwebi abakhethiweyo.
ISIPHO ESIBALULEKILEYO SABASEBENZISI BEVIBER! Ivenkile yeevenkile kunye neKhowudi yokuSebenzisa ukufumana iP150! Malunga noLazada. ILazada.sg yindawo ekuthengwa kuyo kwi-Intanethi esemazantsi mpuma Asia. ILazada izinze eSingapore kwaye inikezela ngamava okuthenga akhawulezileyo, akhuselekileyo kwaye alungele ukuthengwa kwi-Intanethi. Kuphela zezona mveliso zisemgangathweni kunye nezinyaniweyo kwintengiso ezikhuthazwayo kwi-lazada. Sisisombululo esimiselweyo sokwenza izinto ezahlukeneyo ukusuka kubuhle nakwifashoni ukuya kwi-elektroniki kunye ...